မတ်လ 2017 - စာမျက်နှာ4- NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
KUSI အဆင့်မြှင့်မှုများ ENG ကင်မရာများကို JVC2/3လက်မချိတ်ဆက်ပြီးသည် CAM GY-HC900 မှ
ATEME NPC မီဒီယာမှာအပြည့်အဝ-IP ကိုလုပ်ငန်းအသွားအလာ & Multi-screen ကိုန်ဆောင်မှုများကိုဖွင့်
GlobalConnect ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုနှင့်အလှူငွေများအတွက် Nevion virtuoso နှင့် VideoIPath ဖြန့်ချထား
Vionlabs '' အသစ်ဖြန့်ချိအကြောင်းအရာ Discovery ပလက်ဖောင်း IBC2019 မှာ Show ကိုအကောင်းဆုံးအနိုင်ရ
Home » 2017 » မတ်လ (စာမျက်နှာ 4)
လစဉ်မော်ကွန်း: မတ်လ 2017
ဗင်းနစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Virtual Reality ရုပ်ရှင်များအတွက်အထူးပထမဦးစွာအစဉ်အဆက်ပြိုင်ပွဲ Hold မူမည်
အဆိုပါဗင်းနစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်စက်တင်ဘာလ 31 thru သြဂုတ်လ5ကနေ running, ကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်အကြီးဆုံးရုပ်ရှင်ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပြီး, တစ်ဖန်, ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ဦးဆောင်အစွန်းပေါ်မှာဖြစ်လိမ့်မည်။ ယခုနှစ်တွင်အဆိုပါပွဲတော်အထူးသ virtual reality နည်းပညာနှင့်ဖွဲ့ခဲ့ကြကြောင်းရုပ်ရှင်များအတွက်သီးခြားယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ကြည့်ရှုကိုင်ထားမည်ဖြစ်သည်။ အသစ်အပြိုင်အဆိုင်အပိုင်းအဖြစ်လူသိများလိမ့်မည် ...
အဆိုပါလူငယ်တူရကီကွန်ယက် Automation နှင့် Telestream Vantage နှင့်အတူတိုးချဲ့အွန်လိုင်းမီဒီယာထုတ်ယူခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူး
နီဗားဒါးစီးတီး, ကယ်လီဖိုးနီးယား, မတ်လ 29, 2017 -Telestream, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူ, ယနေ့အဆိုပါလူငယ်တူရကီ (TYT) High-အသံအတိုးအကျယ်တည်းဖြတ်ရေး, transcoding နှင့်ဖြန့်ဖြူးအလိုအလျောက်မှ Telestream ရဲ့ Vantage မီဒီယာထုတ်ယူခြင်းပလက်ဖောင်းသုံးပြီးကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ၎င်း၏ပရိုဂရမ်းမင်းအဖြစ်လူမှုရေးမီဒီယာမှထုတ်ဝေအကြောင်းအရာ။ တိုက်ရိုက်, Multi-ကင်မရာအဖြစ်က၎င်း၏ Los Angeles မြို့-based စတူဒီယိုကနေထုတ်လုပ် ...
Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်း 26th နှစ်ပတ်လည် FLiCKERFEST International နှင့်သြစတြေးလျဆုပေးပွဲပံ့ပိုးကူညီ
Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းကိရိယာ, ကင်မရာထောက်ခံမှုဖြေရှင်းချက်တီထွင်ဆန်းသစ်၏ထုတ်လုပ်မှုခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, မကြာသေးမီကများအတွက် Miller ကသြစတြေးလျဆုချီးမြှင့်စပွန်ဆာ - Miller ကသြစတြေးလျက Short Film ဆစ်ဒနီ, မတ် 30, 2017 အတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်များအတွက် Miller ကသြစတြေးလျဆုကို၏ Winner မှ AIR အလွိုင်း tripod System ကိုတင်ပြ အဆိုပါ 26th နှစ်ပတ်လည် FLiCKERFEST အင်တာနေရှင်နယ်မှာသြစတြေးလျက Short ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ...
Bexel 2017 NAB ပြရန်မှာကမ္ဘာ့ပထမဦးစွာအသေးစားအမြင့် Frame ကနှုန်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ကင်မရာမိတ်ဆက်မည်
Bexel ကြောင့်ဧပြီလရဲ့ 800 NAB Show မှာက၎င်း၏ရှင်းလင်းမှု 2017 ကင်မရာမိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်နှင့်အထူးသတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ဒီဇိုင်းကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးသေးသေးလေးမြင့်မားတဲ့ frame rate ကိုကင်မရာများ၏စွမ်းရည်များသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါရှင်းလင်းမှု 800 ကင်မရာကို HFR နဲ့မြန်နှုန်းမြင့်, POV ကင်မရာနှင့်လိုအပ်သော Real-time အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားတိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်မှုအတွက်တီထွင်ခဲ့ပါတယ် ...
Syncro န်ဆောင်မှုများဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ် QC လုပ်ငန်းအသွားအလာ, Interra စနစ်များတုတ်နှင့်အတူအကြောင်းအရာအရည်အသွေးပိုကောင်းစေ
CUPERTINO, ကာလီဖိုးနီးယား - ။ မတ်လ 28, 2017 - Interra စနစ်များ, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းမှ software များထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများတစ်ဦးဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူ, ယနေ့ Syncro န်ဆောင်မှုများဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများ၏တစ်ဦးက New York City-based ပံ့ပိုးပေးကြောင်းကြေညာခဲ့သည် ဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်ရှင်အကြောင်းအရာအဘို့, ယုံကြည်စိတ်ချရတိုးမြှင့်ဖို့ Interra စနစ်များ '' တုတ် (R) automated, ဖိုင်-based အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (QC) ဖြေရှင်းချက်ချထားလိုက်ပါတယ် ...
ခြောက်ဆယ် Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Altibox Set-Top-Box ကိုများအတွက်ပရီမီယံအတွေ့အကြုံဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဘဝမှကယျတငျ
Altibox နှင့်နှစ်ခြောက်ဆယ်ယနေ့နှစ်ခြောက်ဆယ်လာမည့်မျိုးဆက် Altibox Set-top ဖြေရှင်းချက်၏မေလ 2017 ပစ်လွှတ်ကိုထောကျပံ့ဖို့ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းကြွယ်ဝတဲ့ metadata ကိုမူတည်ပြီးနှင့်ပလက်ဖောင်းများ၏ကျယ်ပြန့်အနှံ့က၎င်း၏ဖောက်သည်တစ်ဦးတိုးမြှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ Altibox enable ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ် ...
Timeline ကိုရုပ်မြင်သံကြားအသံလွှင့်ယာဉ်အပြင်ဘက်တွင်၎င်း၏နယူးအိုင်ပီ 4K များ၏နှလုံးမှာ axon Cerebrum ထိန်းချုပ်ရေးထားသည်
axon ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒီဇိုင်းရဲ့ Cerebrum စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်, Timeline ကိုရုပ်မြင်သံကြား, ပြင်ပမှာထုတ်လွှင့်နေတဲ့အဓိကပံ့ပိုးပေးသဖြင့်မေလအတွက်ဖြန့်ချိလျက်ရှိကြောင်းအသစ်တခုက IP-based အသံလွှင့်ပြင်ပမော်တော်ယာဉ်များ၏ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရန်အားလုံးအဓိကဗြိတိန်ကွန်ယက်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စတူဒီယို based ဝန်ဆောင်မှုများကို post ပါလိမ့်မယ်။ အသစ် 32-ကင်မရာသုံးဆ-တိုးချဲ့ထရပ်ကား, SAM ကို IP ကိုအခြေခံအဆောက်အဦများ အသုံးပြု. 4K HDR ကို compressed လုပ်မထားတဲ့ထုတ်လွှင့်ကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ် ...
ရာထူး: ဒီဇိုင်းစတူဒီယို Internship ကုမ္ပဏီ: Bluespire တည်နေရာ: Minneapolis MN အမေရိကန် Bluespire ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များရဲ့ start မှာသူတစ်ဦးဒီဇိုင်းကိုအလုပ်သင်ဆရာဝန်ရှာဖွေနေသည်ပင်စပ်စုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အပေါ်အတွေ့အကြုံရှိဒီဇိုင်နာများကနေသင်ယူဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ကြသည်။ သင်ရုံအဖြစ်အသည်းအသန်နေသောအနုပညာဒါရိုက်တာများ, ဒီဇိုင်နာများ, developer များ, စာရေးဆရာများ, ဗျူဟာနှင့်အကောင့်မန်နေဂျာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည် ...
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ / အိုင်တီထောက်ခံမှု
ရာထူး: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘီဘီစီဝါရှင်တန်သတင်းဗျူရိုထဲမှာသေးငယ်တဲ့အသင်းကို join ဖို့ခိုင်မာတဲ့အိုင်တီကျွမ်းကျင်မှုနဲ့လက်ထောက်အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာချုပ်ရှာနေကြသည်ဝါရှင်တန်ဒီစီအမေရိကန်: ဗြိတိန် Broadcasting Corporation တည်နေရာ: အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာ / အိုင်တီကုမ္ပဏီထောက်ခံပါတယ်။ အဆိုပါစံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို PC, MAC နှင့် Linux နှင့်အတူခိုင်မာသောကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်လိမ့်မယ်; အဖြစ်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားများတွင်ထုတ်လွှင့်အတွေ့အကြုံကို။ လုပ်ငန်းတာဝန်များပါဝင်မည်ဖြစ်သည် ...
Web ကို Programmer Analyst,
ရာထူး: Web ကို Programmer Analyst, ကုမ္ပဏီ: San Mateo ကောင်တီကွန်မြူနတီကောလိပ်ခရိုင်တည်နေရာ: ရက်ဒ်ဝုစီးတီး, CA အမေရိကန် San Mateo ကောင်တီကွန်မြူနတီကောလိပ်ခရိုင်မတူကွဲပြားမှုတွေနဲ့ရှယ်ယာများ၏အခြေခံမူတန်ဖိုးထားသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်မိမိတို့၏ရည်မှန်းချက်များနားလည်သဘောပေါက်ဖို့သူတို့ကိုအားပေးအားမြှောက်, စာသင်ခန်းများ၏နှင့်ထွက်ပူးပေါင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ကျောင်းသားများကိုအဓိကထားကွဲပြားခြားနားမှုပါဝငျတဲ့ပေါကြွယ်နှင့်ပြောင်းလဲနေသောသင်ယူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေသည် ...
Lynx Technik NAB 2017 မှာ greenMachine ပလက်ဖောင်းအဘို့အလေး App အသစ်များစတင်
Lynx Technik AG က, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် AV စနစ်ဆစ်ဂနယ် application များအတွက် modular interfaces ၏ပံ့ပိုးပေးဒီနေ့ကသူ့ရဲ့ဆုရgreenMachine®ပလက်ဖောင်းလေး App အသစ်များတီထွင်မူကြောင်းကိုကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါလေး App အသစ်များအဖြစ်အသစ်သော titan greenMachine ဟာ့ဒ်ဝဲပလက်ဖောင်း NAB 2017, တဲ SL10321 မှာမိတ်ဆက်ပြသပါလိမ့်မည်။ greenMachine စျေးကွက်အပေါ်သစ်တစ်ခုနှင့်ထူးခြားသောသဘောတရားသည် ...
Elbphilharmonie ကျင်းပမဲ့နေရာတဝိုက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖျော်ဖြေပွဲ stream မှ Exterity နှင့် Perfect မီဒီယာ Solutions ကိုရွေးကောက်ပြီး
Edinburgh, 28th မတ်လ 2017 - Exterity, အိုင်ပီဗီဒီယိုနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်နည်းပညာများတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူ, ယနေ့ယင်း၏အိုင်ပီကိုဗီဒီယိုစနစ်ကဂီတချစ်သူများတစ်ဦးကမ္ဘာ့အဆင့်မီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံကိုပေး Elbphilharmonie ကရွေးချယ်ထားပြီးကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်သစ်ကို Hamburg ဖျော်ဖြေပွဲခန်းမဧည့်သည်များ ။ အဆိုပါ Elbphilharmonie, ဟမ်းဘတ်ရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲအသစ်ခန်းမ, ဇန်နဝါရီလ 2017 ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အကြီးဆုံးတစ်ခုမှာ ...
Simplestream ရဲ့တိမ်တိုက်တီဗီပလက်ဖောင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံများ TracePlay
အင်္ဂါနေ့ 28TH မတ် 2017, လန်ဒန် - Simplestream, မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုများကိုဦးဆောင်ပေးသူ၎င်း၏တိမ်တိုက်တီဗီဖြေရှင်းချက်င်း၏ပါဝါမှ MTG ပိုင် Trace, မြို့ပြဂီတနဲ့ဖျော်ဖြေရေးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာအုပ်စုကရွေးချယ်ထားပြီးကြောင်းယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ဝယ်လိုအားအပေါ်သစ်ကိုကြေးပေးသွင်းသောဗီဒီယို (SVOD), တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ TV နဲ့ TracePlay ရာပူဇော်သက္ကာကိုရေဒီယို။ သဲလွန်စမြို့ပြများတွင်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် ...
BOCC - မီဒီယာစစ်ဆင်ရေးအင်ဂျင်နီယာချုပ်
ရာထူး: BOCC - မီဒီယာစစ်ဆင်ရေးအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: Akamai တည်နေရာ: မီဒီယာအတွက်ကင်းဘရစ်နေ MA အမေရိကန်မီဒီယာစစ်ဆင်ရေး Center ကကျွမ်းကျင်သူ Akamai Professional ကန်ဆောင်မှုများထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းစင်တာမှအဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနှင့် Akamai မီဒီယာဖြေရှင်းချက်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် troubleshoot မှ Akamai ရဲ့ client များနှင့်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သင်, ဖောက်သည်အပေါ်မိမိတို့၏မီဒီယာအရည်အသွေးကိုအစဉ်အမြဲခေတ်မီ Flash ကိုလှည့်ပတ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်သေချာအောင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် ...
စာရေးဆရာများခေါင်းဆောင်များနောက်ထပ် Strike ခွင့်ပြုရန်ရှာအမျှအစည်းအရုံးညှိနှိုင်းမှုပျက်ကွက်
အမေရိက၏စာရေးဆရာအစည်းအရုံးသပိတ်ပေါ်သွား၏နောက်ဆုံးသောကာလ 2007 အတွက်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအစည်းအရုံးနှင့် Motion Picture ၏မဟာမိတ်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်သူများအကြားမကြာမီကစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားခြင်းနှင့် sputter မှစတင်ခဲ့ကြပြီးအဆိုပါအစည်းအရုံးရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုအခြားသပိတ်ကို authorize စဉ်းစားရန်ရာထူးနှင့် file ကိုမေးမွနျးခဲ့သညျ။ အဆိုပါအစည်းအရုံးရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကြောင်းဆိုထားသည် ...
Hartman ပြီးတော့ Lunden, 2017 NAB ပြရန်မှာဂုဏျတငျခံရ "ကောငျးနံနက်အမေရိကတိုက်" ၏မူရင်းကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်
အသံလွှင့်ရှေ့ဆောင်တွေဒါဝိဒ်သည် Hartman နဲ့ Joan Lunden လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံးတို့ကဂုဏ်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး Las Vegas မှာအဆိုပါ 2017 NAB ပြရန်စဉ်အတွင်း NAB ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Service ကိုဆုချီးမြှင့်ခံရလိမ့်မည်။ အဆိုပါနှစ်လုံးကိုတနင်္လာနေ့, ဧပြီ 24 ပေါ် Blackmagic ဒီဇိုင်းအားဖြင့်ကမကထပြုသည့် NAB Show ကိုဖွင့်လှစ်မှာကိုသူတို့ဆုလကျခံပါလိမ့်မယ်။ လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံးဝန်ကြီးချုပ်ထောက်ခံအားပေးမှုအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည် ...
4 ၏စာမျက်နှာ 44«ပထမဦးစွာ...«23456	»	102030...နောက်ဆုံး»
ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် / Video Editor